Dharka hurdada ee xariirta |Shirkadda Wonderful Manufacture And Trade Company Limited waxay ku saleysantahay Maraykanka
Sanadihii la soo dhaafay, dadka intooda badan waa ay jeclaayeendharka xariirta ah ee dharka seexashadaaad u badan sababtoo ah waa walxo qaali ah.Si kastaba ha ahaatee, in yar ayaa og asalka iyo taariikhda dharkan.Maqaalkan, waxaad ku ogaan doontaa dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay inaad ka ogaato dharka xariirta ah iyo taariikhdeeda.
Dharka xariirta ah ayaa markii ugu horeysay lagu sameeyay Shiinaha qadiimiga.Si kastaba ha ahaatee, shaybaarada xariirta ee ugu horreeya ee badbaaday ayaa laga heli karaa joogitaanka borotiinka xariirta ah ee fibroin ee muunada ciidda ee laga soo qaaday laba xabaalood oo ku yaal goobta Neolithic ee Jiahu ee Henan, oo soo taxnayd ilaa 85000.
Waqtigii Odyssey, 19.233, Odysseus, oo isku dayaya inuu qariyo aqoonsigiisa, xaaskiisa Penelope ayaa la waydiiyay dharka ninkeeda;waxay xustay inay soo xidhatay shaadh u dhalaalaya sida maqaarka basasha la qalajiyey oo tilmaamaya tayada quruxda badan ee dharka xariirta ah.
Boqortooyada Roomaanku aad bay u qiimeeyeen xariirta.Haddaba waxay ka ganacsan jireen xariirta ugu qiimaha badan, taasoo ah xariir Shiinees ah.
Xariirtu waa fiber borotiin ah oo saafi ah;Qaybaha ugu muhiimsan ee fiilada borotiinka ee xariirta waa fibroin.Dirxiga cayayaanka qaarkood waxay soo saaraan fibroin si ay u sameeyaan qumbaha.Tusaale ahaan, xariirta hodanka ah ee ugu fiican ayaa laga helaa kookaha dirxiga ee dirxiga silkworm ee mulberry kaas oo lagu koriyo habka sericulture.
Ma ogtahay in muuqaalka xariifka ah ee xariirta uu sabab u yahay qaab dhismeedka priism ee saddex xagal ee fiber xariirta?Qaab dhismeedka saddex-geesoodka ah wuxuu u oggolaanayaa dib-u-celinta iftiinka soo socda ee heerar kala duwan, taasoo horseedaysa midabyo kale.
Cayayaanka kala duwan ayaa sameeya xariir;Aboorka diirku wuxuu ahaa midka kaliya ee loo isticmaalo soo saarista dunta.Dirxiga cayayaanka ee la kulma metamorphosis waxay horseedaan soosaarka xariirta.
Badi xasharaadka u eg shabkada iyo crickets raspy waxay soo saari karaan xariir noloshooda oo dhan.Shinnida, xashiishyada, kuwa lamid ah, baalal-laaweyaasha, boodada, duqsiga, iyo dhexda ayaa sidoo kale soo saara xariir.Sidoo kale, arthropods sida caarada iyo arachnids waxay soo saaraan xariir.
Shiinaha ayaa ahaa dadkii ugu horreeyay ee soo saara xariirta xilligii dhagaxa ka hor inta aan loo gudbin meelaha kale ee adduunka sida Thailand, India, Bangladesh, iyo Yurub.
Baaxadda wax soo saarka xariirtu way ka yar tahay kan la beeray.Qumbaha laga keeno duurjoogta ayaa horey u lahaa pupa ka hor inta aan la ogaanin, taasoo keentay in dunta xariirta ah ee dhistay qumbaha la jeexjeexay oo dhererkoodu gaaban yahay.
Barashada xariirta pupae ayaa horseeday wax soo saarka ganacsiga ee xariirta.Caadi ahaan waxaa loo abuuraa si ay u soo saaraan dun xariir ah oo midabkeedu cad yahay, taas oo aan lahayn macdanta dusha sare.Ciribtirka bararka waxay ku dhacdaa in lagu rido biyo karkaraya ka hor inta aysan soo bixin aboorayaasha qaangaarka ah.Ama adigoo si fudud irbad uga muday.Ficiladani waxay kiciyeen dhammaan qumbaha in loo kala furfuro sidii dun joogta ah, taasoo u oggolaanaysa maro ka xoog badan xariirta.Ugu dambeyntii, qumbaha xariirta duurjoogta ah ayaa laga saarayaa habka dheef-shiid kiimikaadka.
Dharka hurdo ee xariirta ee Shiinahaisticmaal nooc xariir ah oo aad qaali u ah, khafiifa, jilicsan, oo siman.Sababtoo ah sifooyinkaas, codsigeedu wuxuu noqon doonaa mid ku habboonbajamas xariir ah.
Nooca iibka kulul
Adeegga gaarka ah
calaamada daabacaadda caadada ah
summada dhaqidda caadada ah
sumadda caadada ah
naqshadaynta daabacaadda caadada ah
Maxay 6A uga dhigan tahay 100% dharka xariirta ah ee bulberry?
Caadi ahaan, alaabta xariirta ah waxaa lagu qiimeeyaa A, B, C. Halka darajada A uu yahay kan ugu wanagsan ee dhamaantood leh tayada ugu sareysa, Fasalka C ayaa ah kan ugu hooseeya.Darajada Xariirtu aad bay saafi u tahay;waa la kala furfuri karaa si dheer oo aan jabin.
Sidoo kale, alaabta xariirta ah ayaa sidoo kale lagu qiimeeyay tiro taas oo ka dhigaysa nidaamka darajooyinka mid ka sii dheer.
Tusaale ahaan, waxaad heli kartaa 3A, 4A, 5A, iyo 6A.
6A waa xariirta ugu sareysa uguna tayada wanaagsan.Tani waxay tusinaysaa in marka aad aragto badeecada xariirta ah ee lagu qiimeeyay 6A, ay tahay tayada ugu sareysa ee nooca xariirta ah.
Intaa waxaa dheer, xariirta leh Fasalka 6A waxay ku kacaysaa qiimo ka badan tayadooda tayadooda marka loo eego kuwa fasalka 5A.Taas macnaheedu waa in adharka xariirta ee hurdadaXariir laga sameeyay fasalka 6aad Xariirtu waxay ku kacaysaa qiimo ka badan sababtoo ah xariirta tayada wanaagsan ee la isticmaalodharka hurdada oo laga sameeyay xariirta fasalka 5A.
Maxaad La Tahay Inaad Samayso Kahor Intaadan iibsan Dharka Hurdada ee Xariirta ah?
Waqtigan xaadirka ah, dad badan ayaan kala saari karinbajamas xariir ahiyo poly satin pajamas.Tan waxa u sabab ah isku ekaanshaha ay ka samaysan yihiin iyo noocyada.Haddii aad xaaladdan ku sugan tahay, keligaa ma tihid:
Sofiya waxay ku jirtaa dukaan dharka lagu iibiyo oo lagu iibiyo noocyada kala duwan ee bajamada.Si la mid ah inantii saaxiibkeed shukaansi ka kacay bay la jahawareertay oo kale.Miyaan kuu sheegnaa sababta ay Sofiya u wareertay?
Hagaag, waxay rabtaa inay soo qaadato dhar hurdo ah maalinta jacaylka sexy.Markaa waxay u baahan tahay bajamas jilicsan oo jilicsan, kuma yaraanayso maydhista, ha muujinin wasakh, iyo mid tayo wanaagsan leh.
Habka farsamada ee Sophia, waxay si fudud ugu baahan tahay dhar hurdo ah oo ka caawin doona inay simbiriiriso, malaa'igta sare, nasashada habeenkii ee skigrammic.Laakiin, haddii aad tahay sida Sofiya, waa inaadan welwelin.Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad dhuuxdo macluumaadka maqaalkan.
Waa maxayDharka hurdada ee xariirta ah?
Markii ugu horeysay 8500 sano ka hor ayaa laga helay Shiinaha qadiimiga.Xariirtu waxay ahayd gabal qaali ah ilaa waagii hore.Ilaa hadda, qiimaha xariirta ayaa weli ah mid aad u sarreeya.Waxaa jira noocyo kala duwan oo xariir ah.Laakin6 Bajamas xariir ah oo bulberry ahwaa kan ugu ganacsiga badan.Waa kuwa ugu wanaagsan ee tolmada leh ee xariirta ah;sababtaas awgeed waxaa loo toleeyey xariirta bulberry.Taasi waa sababta xariirta bulkhu guud ahaan loogu yeero xariir.
Dharka xariirta ah ayaa leh qaab jilicsan oo siman, iftiin, qabow oo raaxo leh in la xidho.Taasi waa sababta inta badan loo isticmaalo dhar hurdo, xijaab, lebbis iwmDharka xariirta ah waxaa laga heli karaa fiber dabiici ah oo laga soo saaro "xirnooyinka", guud ahaan xariirta bulk.Qaabka aad u dhisan ee fiber-ka xariirta ahi waxa uu saamaxayaa in iftiinka xaglo kala duwani uu ka soo baxo marada xariirta, taasoo keenta midabo kala duwan.
Farqiga udhaxeeya Pajamas Poly Satin iyo Xariirta Mulberry Pajamas
Qiimaha xariirta: Xariirtu waa qaali in la soo saaro.Waa maro qaali ah.Taas awgeed, qiimaha bajamaada xariirta ah ee buluugu waa sarreeyaa.Wax badan ayay u baahan tahay in la bixiyoDharka hurdo ee xariirta mulberrygabalI aamin;waa u qalantaa.Waxyaabaha quruxda badan ee ku saabsan dharka xariirta ee bulk waa in ay caadi ahaan diirimaad iyo raaxo leh jiilaalka oo raaxo leh.
Midabka hurdada xariirta miyay libdhaan?
Jawaab celin togan
Sideen Ku Caawin karnaa inaad Guuleysato?
Tayada La Xaqiijiyay
Aad u daran laga bilaabo maadada ceeriin ilaa habka wax soo saarka oo dhan, oo si adag u baadh dufcad kasta ka hor dhalmada
Adeegga gaarka ah MOQ hoose
Dhammaan waxaad u baahan tahay waa noo soo sheeg fikradaada, waxaanan kaa caawin doonaa inaad sameyso, laga bilaabo naqshadeynta mashruuca iyo alaabta dhabta ah. Ilaa iyo inta la toli karo, waan samayn karnaa. Oo MOQ waa 100pcs oo keliya
Astaanta Bilaashka ah, Summada, Naqshadda Xidhmada
Kaliya noo soo dir astaantaada, summadaada, naqshadeynta xirmada, waxaan sameyn doonnaa jeesjees si aad u hesho muuqaal muuqaal ah si aad u sameysodhar hurdo oo xariir ah oo qumman,ama fikrad aan dhiirigelin karno
Tusaalaha caddaynta 5 maalmood gudahood
Kadib xaqiijinta farshaxanka, waxaanu samayn karnaa muunada 5 maalmood gudahooda oo si degdeg ah u dirnaa
7-15 Maalmood Bixinta Jumlad
Xirashada xariirta caadiga ah ee loo habeeyay iyo tirada ka hooseysa 500 oo xabo, wakhtiga hogaanka waa 15 maalmood gudahooda tan iyo markii la dalbaday.
Khibrad qani ah oo ku saabsan Habka Hawlgalka Amazon ee UPC koodka daabacaadda bilaashka ah & samee calaamadaynta & sawiro HD bilaash ah
Hel Muunad bilaash ah Maanta!
Waxaan jeclaan lahayn inaan kaa maqalno
fariin noogu soo dir adigoo isticmaalaya foomka hoose.